APE: Onye edemede, onye nkwusa, onye ọchụnta ego | Martech Zone
Na nkwadebe maka nyochaa anyị na Guy Kawasaki, azụrụ m otu APE: Onye edemede, onye nkwusa, onye ọchụnta ego-Otu esi ebipụta akwụkwọ.
M na-agụ ọtụtụ ndị Guy Kawasaki akwụkwọ na kemgbe a ofufe n'ihi na ezi oge ụfọdụ (ijide n'aka na-akụ n'ime Ajụjụ ọnụ maka oge mbụ ọ tweeted m… na-akpa ọchị akụkọ!). Akwụkwọ a dị ezigbo iche, agbanyeghị… ọ bụ akwụkwọ ntụzi-aka zuru ezu banyere otu esi edepụta akwụkwọ gị.
Ndị edemede Guy Kawasaki na Shawn Welch na-amalite APE: Onye edemede, Onye mbipụta akwụkwọ, Onye ọchụnta ego na ezi akụkọ banyere iwe Guy na iwepụta akwụkwọ ikpeazụ ya na kọmputa site na iji ụlọ ọrụ zụta ọtụtụ. Akwụkwọ ahụ na-agagharị na nsogbu niile nke ederede - site na usoro, na ngwaọrụ, iji kesaa ahịa. O siri ike karịa ka ị chere (rue mgbe akwụkwọ a!).
Akwụkwọ ahụ na-akọwa ụzọ niile egosipụtara maka ịmepụta ebook gị, ruo na ihuenyo nke ngwaọrụ iji, saịtị iji rụọ ọrụ, na ntanetị gaa n'ahịa. Ama juru m anya na nkọwa niile. Ọ bụ n'ezie usoro ntụzi-aka nke ntụzi-aka onye ọbụla ga-ebipụta.
Obi tọrọ m ezigbo ụtọ na azụrụla m ma kesaa mkpụrụ 3 ọzọ… Jenn na Marty ndị na-arụ ọrụ na akwụkwọ nke ha rue Netan, onye na-ese ihe anyị, onye ga-enyere aka na eserese ahụ.
Gịnị Mere Would Ga-eji Na-ebipụta Akwụkwọ?
Ohere nke ibipụta onwe anyị masịrị anyị nke mbụ mgbe anyị gbara Jim Kukral ajụjụ ọnụ. Jim gosipụtara anyị na usoro achọrọ maka akwụkwọ ọgụgụ na-arịgo ngwa ngwa karịa mmepụta nke akwụkwọ ntanetị. Nke a bụ oge na-enweghị atụ maka ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ iji wulite ntụkwasị obi na ikike site na ibipụta akwụkwọ ebook.
Ọ bụrụ n’inwere ihe dị ịtụnanya ị ga-ekwu… nke a bụ ohere gị ibipụta ma kesaa ya!
Tags: apeodeee-akwụkwọebookentrepreneurGuy kawasakibipụtankwusaonwe-ebipụta
Feb 14, 2013 n’elekere 10:44 nke abali
Ọ na-abanye na ghostwriting n'akwụkwọ? O nwere atụmatụ maka ndị na-enweghị oge (ma ọ bụ ikekwe talent) ide?
Feb 14, 2013 na 3:24 PM
Ndewo @daveyoung:disqus, enwere ndụmọdụ ide ihe n'akwụkwọ. Echere m na Guy bụ onye mbụ gwara gị na onye na-ede akwụkwọ bụ nnukwu nzọụkwụ ma ọ bụrụ na ịnweghị oge ma ọ bụ nkà. M nwere a ngalaba-ede akwụkwọ na m akwụkwọ na o mere ihe niile mfe… ihu ọma akwụkwọ bụ echiche m ma Chantelle haziri ha na-arụ ọrụ na iche.